တွေးစရာ စာကိုးများ.. ~ ဒီမိုဝေယံ
အမြီးကို ခြေထောက်ပါလို့ ခေါ်စေရုံနဲ့ ခြေထောက်ဖြစ်သွားမှာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ယုံကြည်လက်ခံသွားအောင် လိမ်ညာလိုက်ခြင်းဟာ အလိမ်ပေါ် အလိမ်ဆင့်သွားတာပါဘဲ။ အမှားတခုဟာ အမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် အမှန်တရားထက်တောင် ပိုပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးမား သွာဒစေတယ်။
A successful is doublyalie; an error which has to be corrected is heavier burden than the truth.
ပြည်သူလူထုဟာ အတော်ဆုံးဝေဖန်ရေးသမားထက် ပိုပြီး အသိဥာဏ်ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင်မှာ နစ်မြုပ်တော့မယ့် သင်္ဘောပေါ်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်သီးပြောတဲ့ သတိပေးစကားလောက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ စကားမျိုး မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
ထိခိုက်နစ်နာစရာတွေရှိနေတဲ အမှန်တရားဟာ အခွင့်အရေးအတွက် လိမ်ညာမှု တက်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
လူတန်းစားတစ်ရပ်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို အခြားလူတန်းစားရဲ့ လူမှုအခွင့်အရေးတွေနဲ့သွားပြီး ချိန်ကိုက်တိုင်းတာလို့တော့ မရပါဘူး။
ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုဆိုတာ အင်အားတောင့်တင်းမှုအပေါ်မှာ မူမတည်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်အားကို အမှန်အကန် အသုံးချခြင်းအပေါ်မှာတော့ မူတည်နေပါတယ်။
Greatness lies not in being strong, but in the rights using of strength.
သတ္တိကြောင်တဲ့လူတွေဟာ ပိုပြီးကောက်ကျစ် တတ်ကြတယ်။
မြေခွေးရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို လက်ခံတဲ့ ခြင်္သေ့ဆိုရင်တော့ ကောက်ကျစ်တော့မှာ အမှန်ဘဲ။
တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတိုင်း အသစ်မဖြစ်သလို၊ အသစ်ဆိုတိုင်းလည်း တန်ဖိုးရှိတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ပညာတတ်ပေမယ့် အောက်တန်းကျတဲ့လူဟာ တိုင်းပြည်ကို အမြဲတမ်း နှောက်ယှက်အန္တာရာယ်ပေးနေတဲ့ အဓိကလူတန်းစားမျိူး ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ရှေ့မှာ သံကန့်လန့်ကာကို ချလိုက်ပြီဆိုတော့ နောက်မှာ သူတို့ဘာတွေ ဇြစ်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး။
သံဆိုတာ ပူနေတုန်းထုရတယ်။ ထုနေရင်းလည်း ပူအောင်လုပ်နေရမယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ သမိုင်းကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာနေချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကိုာ်တိုင် သမိုင်းကို ဖန်တီးနေကြပါပြီ။
သင့်ရဲ့ တာဝန်၊ ဆုလာဘ် နဲ့ ကံကြမ္မာတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ ဒီနေရာကို ရောက်နေပြီလေ။
Your duty, your reward and your destiny- are here and now.